ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အလိမ်ခံကြရခြင်း”
ပညာဆိုသည်မှာ သင်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာ ဒါဥပမာပဲ..
မြောက်ကိုရီးယားအကြောင်း တီဗွီမှာ ပြသွားတုန်းကတော့ မကြည့်ထားပဲ ဘယ်သွား ဂလေရိုက်နေလဲ။ သမိုင်းသင်ရိုးသစ်ကို နာ့သမီးမသင်ရလေအောင် လုပ်အုန်းမှဖြစ်တော့မယ်။
ကိုပေါက သမိုင်းအတော်ကျေတာပဲ… ကျွန်မကတော့ သမိုင်းဘာသာမုန်းမှမုန်း… အဲဒီသမိုင်းမှာ အမှတ်နဲခဲ့လို့ဆရာဝန်နဲ့ လွဲခဲ့ရတာ… ခုလာမေးကြည့်ဘာတခုမှမသိတော့ဘူး.. ဒီpostဖတ်ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ကျေးဇူးတင်သွားတယ်… သမိုင်းညံ့လို့ လေ…
သမိုင်းကို သိပ်စိတ်ဝင်စားသလို နှုတ်တိုက်အာဂုံဆောင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းကို တိုင်းပြည်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် အထင်ကြီးလေးစားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဆိုတာ ကိုပေါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အစိတ်ကျော်က ၄ တန်းမြန်မာသမိုင်းမှာ ကျွန်မ ကျက်ခဲ့ပြီး ၏သည်၌၍ အကုန်မှတ်မိနေသေးတဲ့ အောက်ကစာပိုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
“ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံကို ထူထောင်ရန် လမ်းစဉ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရှိစဉ်က စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့သော နိုင်ငံ၏ အင်အားစုများသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် စည်းလုံးမှု ပြိုကွဲလာပြီး ပြည်ထောင်စုကြီးမှ ခွဲထွက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူများကလည်း ဖျက်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို လုပ်ခဲ့ကြသည်။ အာဏာရအစိုးရအဖွဲ့စည်းကလည်း ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ဆက်လက်အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်ခဲ့ပေ။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို အရင်းရှင် ဓနရှင်များက ချယ်လှယ်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီအချင်းချင်းကလည်း စည်းလုံးမှုမရှိပဲ အဏာလုနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့တိုင်းပြည်၏ အထွေထွေ ယိုယွင်းမှုများကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲစေရန် ၁၉၆၂ ခု မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဦးဆောင်သော တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်အာဏာကို လွဲပြောင်းရယူလိုက်ပြီး တော်လှန်ရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ၁၉၆၂ ခု မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။”
စာမေးပွဲမှာ နှစ်တိုင်းလိုလို အမြဲပါလေ့ရှိပြီး ဒါဟာ တော်လှန်ရေးကောင်စီပေါ်ပေါက်လာပုံအတွက် ၁၀ တန် အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ၄ တန်းရောက်မှ သင်ရပေမယ့် ကျွန်မ ကျောင်းစတက်တဲ့ အရွယ်ကစပြီး ဆရာဆရာမတွေကလည်း ဒီအကြောင်းကို နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေမှာ အမြဲပြောပြခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းစတက်ကတည်းက ဒီအတိုင်းပဲ ယုံကြည်လာခဲ့တာ ၈၈ အရေးခင်းကျမှပဲ ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။ အလိမ်ခံခဲ့ရတာ အားလုံးပါပဲ။ နောက်လည်း သူတို့ဆက်လိမ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်မဟုတ်လား။
ဒီပို့ စ်လေး ထိလိုက်တာဗျာ။ ယုတ်မာတဲ့ အာဏာရှင်လူတစ်စုကြောင့် လူတွေ အသိအမြင် ဗဟုသုတတွေ ချို့ တဲ့၊တော်တော်များများလည်း အကျင့်တွေပျက်။ အဲလို ဗဟုသုတတွေချို့ တဲ့၊ အကျင့်တွေလည်း ပျက်နေကြတော့ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ဖို့ ကလည်း အင်အားနည်းသွားပြန်။ ဒီလိုနဲ့ သံသရာ လည်သွားတော့တာပဲဗျာ။ အာဏာရှင်တွေ ပညာရေးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့၊ လူတွေကို မျက်စိပိတ်၊နားပိတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ရာဇဝတ်မှုကြီးပဲဗျာ
ကိုပေါတင်ထားတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား ဗွီဒီယိုကို ကြည့်မိပြီး လွန်ခဲ့သော ၃-၄ နှစ်လောက်က သတင်းတစ်ခု ပြောပြချင်တယ်ဗျ...။ တစ်ခါသားမယ် တရုတ်ဘက်ကို ခိုးဝင်လာတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားက ဒုက္ခသည်များကို အင်တာဗျူးထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ...။ ပြေးသာ ပြေးလာရတယ်...။ သူတို့ခမျာ ကင်ဂျုံအီးလ်ဟာ အဖဘုရားသခင် ဆိုတဲ့ အစွဲကို တော်ရုံ မချွတ်နိုင်ဘူးဗျ...။ ဂျပန်တွေကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ဘရိန်းဝေါ့ရှ် လုပ်ပစ်လိုက်တာ နောက်ဆုံး ဂျပန်ပြည်ကို သူ့သဘောနဲ့သူ ပြန်ခိုင်းတာတောင် အဲဒီ ဂျပန်တွေ မပြန်တော့တာကို ပြန်ကြည့်ပေတော့...။ အတော့်ကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့၊ တော်လည်းတော်တယ်လို့ ချီးကျူးရမယ့် PsyWar/Brain Washing ဗျ...။
ကိုပေါတွေးသလိုပဲ တွေးမိကြလို့ထင်တယ်။ ကျနော် မိသားစု တချို့တွေ့ဖူးတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါတဲ့ ငွေစက္ကူတွေကို တခုတ်တရနဲ့ သိမ်းထားပြီးတော့ ကလေးတွေကို အဲဒီပုံတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေကို မကြာခဏပြပြီးပြောတယ်။ `ကလေးတို့၊ ဒါ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့၊ တို့နိုင်ငံအတွက် လေးစားလောက်စရာ တကယ့်အာဇာနည်ကြီးက သူပဲကွဲ့´ လို့ ပြောတာ ကြားခဲ့ရဖူးတယ်။ ဘာကြောင့် အဲလိုလုပ်နေရတာလဲ ဆိုတော့ ကလေးတွေက သူတို့ကျောင်းမှာ အမြဲတွေ့တွေ့နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုပဲ တကယ့်ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ ထင်သွားကြကုန်မှာ စိုးလို့တဲ့။
Every of your post like to attack PAP(SG). I don't understand why you keen to promote Dr.Chee's party(chee mon lon ma nay bu lar).If I am not your close friend, I don't know what is your intension. Is it want to support Dr. Chee( fighting for freedom like DASSK - what u said) or attacking to PAP or making some post (sar chat tar) or delighting to people who don't know how good is Dr.Chee? or etc ....
What is the reasons? I glad that you highlight what is right and wrong in Singapore. But again & again writing same thing (Hitmawintar chee mon kan) make me confuse, is it you are opposite party member? :P
I know all of your fri will against my comment. I know that your comment box is only welcome to people who said "very good" "kg lite tar" "hti lite tar" .
But good fri can't say only about good things, must say what we see as outsiders.
You put so much effort to get photo (Dr.Chee & DASSK). Congratulation!
To Nyi Nyi,
The writer has the right to write his/her own opinions,likes and dislikes in his/her own blog.
'Take it' or 'leave it' is for the readers to decide.And 'read it'or 'not to read it' is also the reader's choice.It's that simple.
For me, I see this blog is not about Aung San Suu Kyi, is not about Dr. Chee,is not about PAP and is not about Junta.It is all about Freedom, Justice, Fairness and Truth. (if you overview it carefully)
By the way, the photo of Chee& Suu can be easily found on internet.
Dear Nyi Nyi,
Justafew corrections!
I don’t have to put much effort as you thought to get that photo because I have it with me sincealong time ago in the book titled “To Be Free” written by Dr. Chee. Ha Ha, you may take it as another advertizing for Dr. Chee again. That is fine with me. :-)
I always welcome all comments either positive or negative. You see I even allow comments like yours. I never deleted or censored the comments which are critical of my posts except those spam comments advertising the online gambling or directing virus infected links.
What you don’t know is that I am very proud to have as many critical comments as possible in the Myanmar Blog society. I wish our people to express more frankly.
Therefore, please keep up with your good works. I won't sue you for defaming me as LKY did. :-)
Frankly, I feel like, atmosphere of arrogant smell in comments & blog...!!!
" The writer has the right to write his/her own opinions,likes and dislikes in his/her own blog.
'Take it' or 'leave it' is for the readers to decide.And 'read it'or 'not to read it' is also the reader's choice.It's that simple."
Your comment shows that you don't read Ko Paw's articles carefully.If you said it, then people are not neccessary to talk about freedom & fairness?If you like, you stay in that country.If you think not fair(not happy), you don't stay in that country.
"Latt sa thet tat Ko T-Naing ka Freedom, fairness so p luu kyar kg ag arr nay tar kooooo. Basic freedom comment lay taung ma ...writer has the right to write. so p ma yay ya tat bu lar"
To Ko Paw ---
" You see I even allow comments like yours."
My comments just openly bring up my understanding & feeling, don't include any dirty words or abuse or whatever.So is your above sentence isabit funny? Anyway, thanks for allow me to write comment. But if you don't allow, all of your opinion that talking about freedom and Justice are wasted.
I am really enjoy some of your post and you are good writer. No personal attack. Coming to your blog means interested to your post. But continuous parising Dr.Chee make me come out these comments.